Mvura Kurapa Maindasitiri
Saka Sei OuBo Chemical
Specialised & nyatsoshanda
We nyanzvi mukugadzira Polyacrylamide kwemakore 8 yemhando yepamusoro uye zvemakwikwi mutengo. zvekushandisa chikwata chedu nevamwe pre-Sales, rokutengesa uye pashure-okutengesa muitiro kutsigira newe selection, chigadzirwa kunovhenekwa uye pashure-okutengesa basa. Tinovimbisa: nyanzvi hwokugadzira chikwata kukubatsira kuita chisarudzo.
zvekushandisa chikwata chedu nevamwe pre-Sales, rokutengesa uye pashure-okutengesa muitiro kutsigira newe selection, chigadzirwa kunovhenekwa uye pashure-okutengesa basa. Tinovimbisa: nyanzvi hwokugadzira chikwata kukubatsira kuita chisarudzo.
805Room, No. 13, B Zone, Wanda Mansion, Qingdao, Shandong Province
Kufurira kweMolecular Weight paPolyacry...
Industrial wastewater treatment, yakajeka...
Zvimiro zve flocculant
Cationic polyacrylamide yedhaka remvura ...
Cationic polyacrylamide yemunyu wakanyanya yaive...
© Copyright 2011-2020 Oubo Chemical Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.